Viv inogadzirira chimwe chigadzirwa chehungwaru chekugadzira | IPhone nhau
Vabereki vaSiri Viv vanogadzirira kuvhura chimwe chigadzirwa chakakura chehungwaru
Scott Forstall pavakaita iyo kuratidzira kubva kuna Siri makore mashanu apfuura, isu taigona kuti isu takangoona huchenjeri hwekugadzira mune sainzi ngano mafirimu. Chaizvoizvo, ini handitende kuti Siri iAI software (ndinofunga kuti AI inofanirwa kunge iri yakawanda), kana isiri iyo inonzwisisa zvakanyanya kana zvishoma izvo zvatinokumbira uye inopindura kune chimwe chinhu chavakamboronga. Zvichida izvi ndizvo zvaunoda kuchinja Viv, iyo kambani yakagadzira iyo chaiyo mubatsiri anga anesu kubvira 2011 pazvinhu zvese zveIOS uye zvimwe zvigadzirwa zveApple.
Isu takaziva nezveViv Labs kwemakore akati wandei, asi ivo havana chavakagadzira kubvira ivo vaive chikamu che timu yakagadzira Siri. Zvinoenderana na Washington Post, Muvhuro unotevera Viv ichatangisa mubatsiri wayo wekutanga wekuchenjera, software iyo, zvinoenderana nezvatinogona kuverenga mune tweet kubva kuna Dag Kittlaus, anga ari mukukudziridzwa kwemakore matatu nehafu.
Viv inogadzirira kuvhura mutsva mubatsiri
Nguva yekuratidza svondo rinouya mushure memazana matatu emakore ebasa. https://t.co/s0i6gfu4BX
- Dag Kittlaus (@Dagk) Dai 4, 2016
Nguva yekuratidza ichave svondo rinouya mushure memazana matatu emakore ebasa
Chikamu chechitatu chechikwata chiri kuseri kwaSiri ikozvino chiri muViv uye vari kutarisira kupedzisa chiroto chakakura icho chichagona kuita zvakawanda kupfuura zvinoita mubatsiri weApple. Izvi zvinonzwika zvakanaka, asi isu tichafanirwa kumirira kusvika Muvhuro unotevera kuti tione kana vawana zvavanoda.
Viv inovavarira kuve yakavhurika sisitimu, zvakanyanya kana kushoma senge yekutanga vhezheni yeSiri Apple isati yatenga software muna 2010. Sezvinozivikanwa, parizvino inosanganisira zvinongedzo kune zvinoshandiswa uye masevhisi akadai saUber, FTD, SeatGuru uye GrubHub. Mubhuku reWashington Post ivo vanopa semuenzaniso watinogona odha pizza yaDomino pasina kufona, iyo kune rumwe rutivi inoratidza kugona kwesoftware yako asi, ichokwadi, kuti utaure seizvi nemuchina, pamwe zvirinani kufona uye kutaura nemunhu kana kushandisa app, handiti? Chero zvazvingaitika, tichaona zvavakatigadzirira neMuvhuro, Chivabvu 9.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Vabereki vaSiri Viv vanogadzirira kuvhura chimwe chigadzirwa chakakura chehungwaru
Kutenda nenhau, ngatimirirei kuti tione.
Iyo yazvino Tweetbot yekuvandudza yakatakurwa nenhau
Atadza negadziriro yeparutivi kuna iCloud: Zvinokonzera uye Solution